Kushumira ndiko Kutengesa Nyowani | Martech Zone
Ndakaenda ku Vadivelu Comedy Indianapolis AMA kudya kwemasikati uko Joel Book akataura nezve Kushambadzira kune Simba reMumwe. Mharidzo yake yaive neruzivo rwakawanda rwakakomberedza kushandisa kushambadzira kwedhijitari kushandira vatengi zvinobudirira. Kunyangwe, paive nezvakawanda zvakatorwa kubva pachirongwa, paive neimwe yakanamatira kwandiri. Pfungwa yekuti: kushandira ndiko kutengesa kutsva. Chaizvoizvo, iyo pfungwa yekuti kubatsira mutengi inoshanda zvakanyanya pane kugara uchiedza kuzvitengesa.
Izvo zvinogona sei kushanda kune yako email kushambadzira mishandirapamwe? Tumira maemail anobatsira anoshandira chinangwa chaicho chevatengi vako. Heano mienzaniso mishoma:
Chigadzirwa Zviyeuchidzo: kana zvichibvira kune chako chigadzirwa, tumira yekuyeuchidza email kune ako vatengi kana ivo vari padhuze pakuda kutangazve-kuraira kana kutenga kuzadza.
Yakasiiwa Yekutengera Ngoro Yekutengera: dzimwe nguva, vatengi vanoisa zvinhu mungoro yavo nechinangwa chekutenga, asi zvinongokanganiswa vasati vakwanisa kupedzisa. Vakasiya ngoro yekutengera emaimeri inogona kuve nzira yekuremekedza yekuvayeuchidza kuti kune zvinhu zvichiripo uye zvinoita kuti zvive nyore kune vatengi kuti vakurumidze kudzokera uye vanopedzisa kutenga kwavo.
Chigadzirwa Ongororo Zviyeuchidzo: izvi zvakanaka kuhwina-kuhwina email chiyeuchidzo kutumira kune vatengi. Nekutumira, urikuyeuchidza vatengi vako kuti vazadze wongororo pane chigadzirwa chavakangotenga. Nekudaro, yakanaka chigadzirwa ongororo inogona kusimudzira kutendeseka kwako sekambani uye inopa ramangwana vatengi kuwedzera kuvimba mune chako chigadzirwa.
Kana iwe usati wawedzera aya maemail sechikamu cheyako email yekushambadzira chirongwa, wadii? Vanogona kumisikidzwa kuti vatumire otomatiki zvinoenderana nehunhu hwevatengi uye ivo vanoshandira vatengi vako zvinobudirira, pamwe nekuunza imwe mari kune yako yepasi mutsara. Inonzwika kunge slam dunk, handiti? Kana iwe uchida rubatsiro kuita aya marudzi emaemail mune yako yakazara email chirongwa, ndapota svika kuna Delivra nhasi.
Ndeapi mamwe maemail mienzaniso iwe aungati anoshandira vatengi?
Tags: yakasiya ngoro yekutengeraeEmail Marketingzvigadzirwa zviyeuchidzochitoro
Kukadzi 17, 2014 na7:00 PM
Kubatsira vatengi vedu kunogona kuve nyore kana kungava basa, zvichienderana nekuti w anozviona sei. Ini ndagara ndaona kuti kubatsira vatengi vangu ibhizimusi rine mari. kwete chete maererano nemari, asi maererano nehupfumi hwevanhu zvakare.
Uye mazuva ano, nehuwandu hwekutsikirira hunoitwa nevatengi vakaipa mumasocial network, zvine musoro kupfuura nakare kose kushandira vatengi vedu zvakanaka. Iwe hauzive kuti ndiani anoziva ndiani kana kuti ndiani angave nzira yekumashure yekutora mutengi mutsva.